Eburu: otu ikpo okwu iji zụlite ma wuo ngwaọrụ mkpanaka | Site na Linux
Eburu: a ikpo okwu maka na-emepe emepe ma na-ewu mobile ngwaọrụ
Andrew Huang, onye ama ama ama ama maka akụrụngwa mepere emepe na mmeri nke 2012 EFF Pioneer Award, webatara uzo mepere emepe «Precursor» maka echiche nke ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ.
Yiri ka Rasberi Pi na Arduino si enye aka na ngwa maka ihe ịntanetị, Precursor Ebumnuche iji nye ikike ịmepụta na ikpokọta ọtụtụ ngwaọrụ mkpanaka jiri aka gi dozie nsogbu gi.
Onye na-akwado na-positioned dị ka ikpo okwu maka prototyping na nkwenye, mgbe Betrusted bụ otu n'ime ngwaọrụ mkpanaka dị njikere iji wuo na ntọala nke Precursor.
Ebe ọ bụ na enclaves ndị e ji eme ihe maka nchekwa nchekwa dịpụrụ adịpụ anaghị echebe megide mwakpo dị elu, dị ka nchịkọta paswọọdụ site na iji ndị na-egbu osisi ma ọ bụ ịnweta ozi site na nseta ihuenyo, Betrusted na-agbakwunye ihe mmekọrịta ndị ọrụ ( HCI, mmekorita nke mmadu na komputa), na-achota na enweghi ike ichekwa, gosiputa, ma obu bufee data di nkpa nke mmadu guru site na mmadu.
N'adịghị ka ọrụ ndị ọzọ, Onye na-ebu ụzọ na-enye ndị na-anụ ọkụ n'obi ọ bụghị naanị otu mbadamba, mana ngosipụta dị njikere iji site na obere ngwaọrụ enwere:
ụlọ aluminom 69 x 138 x 7,2 mm
Ihuenyo LCD (336 × 536)
batrị (1100 mAh Li-Ion)
osooso na gyroscope.
Enwetara usoro nghazi a abụghị ihe eji eji ya arụ ọrụ, mana ejiri sọftụwia kọwaa SoC dabere na Xilinx XC7S50 FPGA, gbadoro ụkwụ na ya iji hazie i theomi 32-bit RISC-V CPU na-arụ ọrụ na 100MHz.
N'otu oge ahụ, enweghị mgbochi na i emomi akụrụngwa ngwaike ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, arụmọrụ nke ndị nrụpụta dị iche iche, site na 6502 na Z-80 na AVR na ARM, yana igwe ụda na ndị na-achịkwa dị iche iche, nwere ike i emomi.
Ogwe ahụ gụnyere 16MB SRAM, 128MB Flash, Silicon Labs WF200C Wi-Fi, USB Type-C, SPI, I²C, GPIO.
N'ime ikike metụtara nchekwa, enwere ndị na - eweta usoro ihe ntinye aha abụọ na - enweghị usoro.
Na-atụgharị uche, ngwaọrụ a na-abịa n'ebughị mic; a na-aghọta nnabata ụda ga-ekwe omume naanị mgbe ekweisi jikọtara ya hoo haa, ma ọ bụrụ na agbanyere ekweisi, ọ gaghị ekwe omume ịhazi ige ntị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na emebilarị ngwanrọ ngwaọrụ.
Mgbawa maka nkwukọrịta ikuku (Wi-Fi) bụ ngwaike dịpụrụ adịpụ site na ikpo okwu ndị ọzọ ma na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi.
Iji kpuchido nnweta na-enwetaghị ikike, a na-ejikwa ụlọ nwere ike ịgbachi agbachi, RTC dị iche maka nsuso iguzosi ike n'ezi ihe, nlegharị anya na ọnọdụ njikere (accelerometer na gyroscope mgbe niile). Enwekwara agbụ na-ebibi onwe ya ma kpochapụ ozugbo nke data niile, nke arụ ọrụ na igodo AES.
Asụsụ ahụ FHDL Migen (asụsụ nkọwa ederede ngwaike) dabere na Python eji kọwaa akụrụngwa akụrụngwa.
Migen bụ akụkụ nke usoro LiteX, nke na-enye akụrụngwa iji mepụta sekit eletriki.
Dabere na Precursor site na iji FPGA na Litex, ntụnye Betrusted bụ SoC kwadebere, gụnyere VexRISC-V RV32IMAC 100 MHz CPU, yana onye ọkwọ ụgbọala Betrusted-CE nke ejiri 18 MHz Litex VexRISC-V RV32I dị.
SoC Betrusted na-enye mpempe akwụkwọ etinyere etinyere nke cryptographic, dị ka onye na-enye nọmba ọnụọgụ, AES-128, -192, -256 na ECB, CBC na CTR ụdị, SHA-2 na SHA-512, Curve25519 elliptic curve crypto engine. Edere engine nke encryption na SystemVerilog ma dabere na cores encryption sitere na ọrụ Google OpenTitan.
All Precursor na Betrusted components bụ ihe na-emeghe ma dị maka mgbanwe na nnwale n'okpuru Open Hardware License 1.2, nke chọrọ ka emepee ọrụ niile sitere na otu ikikere.
Gụnyere oghere sekit na akwụkwọ nhazi zuru oke maka mbadamba ndị na-enyere aka na ndị inyeaka, Betrusted SoC njikere mmejuputa, yana onye njikwa njikwa (EC).
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya, ịnwere ike ịdebanye aha na njikọ na-esonụ ka e wee gwa gị mgbe ikpo okwu zuru ezu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Eburu: a ikpo okwu maka na-emepe emepe ma na-ewu mobile ngwaọrụ
FreeCAD, ihe ntanye na-emeghe ma na-emepe emepe 3D modeler